Momba anay - Shenzhen Sanying Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sanying Technology Co., Ltd. dia orinasa iray vatsian'ny Taiwan vola izay nanadihady, namokatra ary nivarotra fitaovana saron-tava nandritra ny 20 taona. Fitaovana masinina manokana sy mpanamboatra fitaovana mifandraika amin'ny sarontava. Vokatra marika "SUNNY" an'ny orinasa, ny fampidirana ireo faritra manara-penitra avo lenta, miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta, fitoniana avo lenta, fanekena tsena mora vidy ary fankasitrahana, serivisy avo lenta aorinan'ny ankamaroan'ny mpanjifa. Any Japon, Korea, Taiwan ary ny toerana hafa misy naoty amin'ny serivisy aorian'ny varotra.
Amin'izao fotoana izao, ny tambajotram-barotra ataon'ny orinasa dia nandrakotra ny tanàna lehibe rehetra ao Shina. Amin'ny maha base famokarana azy, manana s & R mahery sy famokarana vokatra avo lenta teknolojia i Shenzhen Sanying. Mba hampifanarahana amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny tsena sy ny filan'ny mpanjifa vokatra avo lenta, ny orinasa dia mifikitra amin'ny filozofia momba ny kalitao matihanina, ny asa marina ary ny serivisy mandanjalanja, manafaingana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao, manatsara ny kalitaon'ny serivisy, ary miezaka ho an'ny mpanjifa dia manohy manatsara ny famokarana sy ny fifaninanana ary miasa mavitrika.
Filozofia momba ny asa: hatsarana vokatra, serivisy misaina ary ara-potoana
Ny votoatin'ny Sanying: ny ekipa mpiara-miasa amin'ny R&D, ny famokarana, ny marketing ary ny serivisy manana ny soatoavina sy ny fahatsapana andraikitra fa ny fifaninana ifotony an'i Sanying.
Toe-tsain'ny ekipan'i Sanying: hentitra amin'ny fifehezan-tena, fikatsahana fikirizana, fizarana fahantrana sy alahelo, mifanome tanana amin'ny ho avy, ho an'ny olona, ​​mahitsy fo ary mahomby, henjana sy mahomby ary miara-mamorona famirapiratana
Sanying's tenet: matihanina, mazoto, avo lenta ary maharitra
Target kendrena: taham-pahafaham-po ny mpanjifa 99%, taham-pahafahana mandalo 100%, taham-panaterana vokatra 98%
Fanatsarana ny vokatra, serivisy mieritreritra sy tonga fotoana
Lamba matevina manohitra ny statika, Masinina saron-tarehy, Masinina saron-tava iray Drag Drag, Kitapo bubble fonosana, Lamba mena, Mpanamboatra sarontava,